Xafiiska ra'iisul wasaaraha oo laba xoghaye yeeshay todobaad gudahiisa
Cabdirisaaq Xuseen Aadan
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed [Khadar], ayaa wuxuu Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim u magacaabay xoghayaha joogtada ah ee xafiiskiisa.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka ayuu ku shaaciyey in Cabdiraxmaan uu jagada ku haynayo si ku meelgaar ah.
Cabdiraxmaan ayaa bedelaya Cabdirisaaq Xuseen Aadan, kaasoo shan maalmood kahor qudhiisa si ku meelgaar ah loogu magacaabay xilkaas.
"Waxaan Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim u magacaabay in si KMG ah uu u haayo xilka xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/wasaaraha. Waxuu bedelayaa Cabdirisaaq Xuseen Aadan oo si KMG ah horay ugu hayay xilkaan," ayuu Mahdi yiri, isagoo aan shaacin sababta keentay.
Cabdirisaaq ayaa kahor inta aan loo magacaabin jagadan laga qaadey wuxuu kamid ahaa howlwadeenadda xafiiska madaxweynaha.
Dad badan ayaa rumeysan in isbedeladan dhacay ay muujinayaan in jahwareer uu ka jiro xafiiska ra'iisul wasaaraha tan iyo markii Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka kalsoonida kala noqdey Xasan Cali Khayre.
Dhanka kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta soo dedejisay xil ka xayuubinta Cabdirisaaq ay la xiriirto "xadgudub uu kula kacay" Yaxye Cali Hereeri, oo kamid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow Khayre.
Sidda ay tibaaxayaan warbixinada qaarkood, ciidamo uu diray C/risaaq ayaa isku dayey in ay la wareegaan gaari nooca aan xabada karin ah kaasoo uu isticmaalo Hareeri.
Dhacdadaan ay ka gadoodeen Xildhibaano ayaa lasoo wariyey in ay dhacdey kadib booqasho uu Hareeri kaga soo laabtey hoyga Khayre. Mudaneyaasha waxay u dacwoodeen Farmaajo oo amray in la eryo Cabdirisaaq.
Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa ku mashquulsan magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub, kaas oo fahfaahino kala duwan ay kasoo baxayaan cidda noqoneyso, iyaddoo ay socdaan gorgortan iyo wadahadalo ku aadan jagadaas.
Qaad badan oo si qarsoodi ah lagu soo geliyey Muqdisho oo la gubay
Soomaliya 19.04.2020. 15:50
Maandooriyahaas ayaa lagu waramay in uu ka yimid dhanka waddanka Itoobiya.
Soomaaliya: Kiisaska Covid-19 oo dhaafay 100, bukaan cusub oo dhintay
Soomaliya 17.04.2020. 21:38
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya oo iska fogeeyay eedeyn loo jeediyey
Soomaliya 15.04.2020. 12:55
Digniino laga bixiyay ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya [Sabab]
Soomaliya 18.08.2018. 10:09
Dowladda oo raaligelin ka bixisay xayeysiiska shaqo ee carada dhaliyey
Soomaliya 11.04.2020. 20:02
Afar dal oo lagu taliyey in laga xanibo wadahadalka DF iyo Somaliland
Somaliland 09.04.2020. 20:50
Warbixin naxdin leh oo laga soo saarey Ciidamada Soomaaliya
Soomaliya 09.08.2018. 01:50
Maxbuus ku dhintay Xabsi Dhexe ee Xamar [Akhri Sababta]
Soomaliya 07.08.2018. 09:00
Warsame oo dalab ku aadan doorashada u diray Farmaajo iyo maamulada 24.11.2020. 19:40
Bileyska Paris oo lagu dhaliilay fal ay kula kaceen qaxooti Soomaali ah 24.11.2020. 17:30
Walaac laga muujiyey xaalka ciidanka Tigray ee howlgalada UN-ka 24.11.2020. 15:00
Rooble oo warbixin siiyey Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay 24.11.2020. 14:15
Sheekh Shariif oo loo doortay gudoomiyaha Midowga Musharixiinta 24.11.2020. 13:24
Britain oo baaq kasoo saartey xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya 24.11.2020. 11:16